download Дром – цены на машины APK yakamuva version 4.6.0 yamadivayisi we-android - ApkZip.com
Izimemezelo ezingaphezu kuka-600,000 zamanje kulo lonke elaseRussiaUkuhlola imoto ngekhodi yewayini
4.8 (96.1%) 264,605 Amavoti
Izikhangiso zokuthengiswa kwezimoto ezintsha noma ezisetshenzisiwe (ezisetshenzisiwe)
Imininingwane yedatha yezikhangiso ezenziwa ngabakwaDroma evela kubantu ngabanye nasezithengisweni zezimoto ifaka ngaphezu kuka-600,000 okunikezwayo okuvela kulo lonke iRussia . Izimoto zalo lonke ukunambitheka nombala, ngqo kusuka kuselula yakho.
Ukuthenga imoto ku-Drome kulula!
- Imoto oyidingayo kulula ukuyithola usebenzisa izihlungi.
Khombisa imingcele yenzalo, isibonelo, imodeli, unyaka wokukhiqiza nosayizi wenjini - uhlelo lokusebenza uqobo luzokhetha izinketho ezifanele.
- Bhalisela izimemezelo ngokuya ngamapharamitha wakho wenzalo
- Funda izibuyekezo ezivela kwabanye abanikazi bezimoto bese wabelana ngomuzwa wakho
- Usebenzisa "umbiko ogcwele wemoto" nge-VIN (vin) khodi, thola ngokuphela kwakhe (amaphoyisa omgwaqo, imithetho yomgwaqo, inhlawulo, ukuboshwa, izingozi zomgwaqo, amaphoyisa omgwaqo)
Ukuthengisa imoto kulula kakhulu!
Beka izikhangiso ekuthengisweni kwemoto yakho ngqo kusuka kufoni yakho. Khuluma ngezimpawu zemoto yakho noma ngesithuthuthu sakho.
Qedela incazelo ngezithombe.
Futhi, sibonga uhlelo lokusebenza, unga:
- dala okubhaliselwe ukumenyezelwa ngokuya ngamapharamitha wemoto ayithandayo;
- Thola izaziso ezisheshayo zezimemezelo ezintsha;
- engeza kuzintandokazi izimoto ozithandayo;
- hlola imoto ngenombolo yewayini kwimininingwane yamaphoyisa omgwaqo;
- engeza amanothi kuzikhangiso;
- phatha izikhangiso zakho;
- Thola izaziso zezinguquko ngamanani ezimoto ezikhethiwe neminye imicimbi;
- Qhathanisa izikhangiso nomunye.
Uma ngabe unezinkinga ngesicelo, ungabhalela ku- [email protected] , futhi iqembu labathuthukisi bethu lizokusiza nakanjani ukubhekana nale nkinga.
Isicelo se Drome sizokukhanga uma usebenzise: Avito (Avito), Auto.ru (auto.ru noma umbhali), uYula (Youla), Carprice, Car Market, am.ru (Am. ru), bibika.ru bibika.ru, autocod avtocod avtokod, library library, Fines of the State Traic Safety Inspectorate of the Russian Federation and SDA 2019 Amathikithi nokuhlolwa, i-anti-outbid, i-auto -yekethisa kanye nokubhaliswa kwepuleti yelayisense